Friday August 25, 2017 - 13:40:08 in Wararka by Super Admin
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo lagu falanqeeyo mawaadiic muhiim ah oo taagan bulshaduna ka dooneyso iney macluumaad ka hesho, inagoo mowduuc walba ka qeyb galina dad ku haboon oo xog fiican ka haya ama aqoon u leh.
Todobaadkan waxaa barnaamijka lagu lafa guray dilkii ay bishii lasoo dhaafay Mareykanku u geysteen Sheekh Cali Maxamad Xuseyn (Sh Cali Jabal) waaligii wilaayada Banaadir. Nin ceenkee ayuu ahaa Sheekhu marka la eego shaqsiyadiisa iyo shaqadii uu hayay? Maxayse tahay ujeedada dhabta ah ee ay Mareykanku u dileen?.
Barnaamijka waxaa marti ku ahaa culimo iyo indheer garad aqoon u leh Sheekha. Sidoo kale waxaa ka qeyb galay dad weyne u badan reer Muqdisho.
Halkan Ka Dhageyso Diiradda Jimcaha 25-08-2017